Mashandisiro ekushandisa marabhini marara zvakanaka. Dzidza kuti ndeipi yekushandisa. | Green Renewables
Daniel Palomino | | Kudzokorora
Nguva dzese dzavanoona zvimwe marara midziyo pasi pemugwagwa kubva vanhu zvishoma nezvishoma pavanoziva uye kutanga Dzokorora, kunyangwe kune nyowani nguva dzose kune kusava nechokwadi kumwe chete.
Muchinyorwa chino isu ticha tsanangura nezve kudzokororazve, iyo 5R mitemo, kudzokorodza midziyo uye zvinogona kudzoreredzwa mune yega yega uye izvo kwete, kuwedzera kune mamwe marara ekudzosera midziyo yeimba, iri iro dambudziko hombe kutanga kudzokorodza nzvimbo mumba.
2 Iyo 5R inotonga
3 Kudzokorora midziyo
3.1 Yero mudziyo
3.2 Mudziyo webhuruu
3.3 Chigadziko chakasvibirira
4 Kudzokorora mabhini kumba
Kudzokorodza maitiro anovavarira kuita shandura tsvina kuva zvigadzirwa zvitsva kana nenyaya yekushandisa kwayo inotevera.
Nemaitiro aya mukushandisa zvizere, izvo zvatino dzivirira iko kushandiswa kwezvinhu zvinogona kubatsira, isu tinogona kuderedza kudyiwa kwezvinhu zvitsva zvakasvibirira uyezve kudzikisira kushandiswa kwesimba rezvakagadzirwa. Kunze kwezvo, futi tinoderedza kusvibiswa kwemweya nemvura (kuburikidza nekupisa uye zvimbuzi zvakateerana zvichiteerana), uye zvakare inoderedza greenhouse gasi inoburitsa.
Izvo zvakakosha kuti zvishandiswezve kubvira iyo zvishandiswezve zvinhu zviri dzakawanda dzakadai se: zvemagetsi zvigadzirwa, huni, machira uye machira, simbi uye zvisina-simbi simbi, uye zvinhu zvinozivikanwa zvakanyanya senge bepa nemakadhibhokisi, girazi uye mamwe mapurasitiki.
Iyo 5R inotonga
Kudzokorora zvakare chinhu chakakosha pakuderedza marara (rimwe rematambudziko ezvakatipoteredza atiri kutambura nawo parizvino) uye chikamu chechishanu che3Rs, mimwe mitemo yakakosha ine chinangwa chekuwana nzanga inosimudzira.
Deredza: izvi zviito zvinoitwa kudzikisa kugadzirwa kwezvinhu zvinogona kuita marara, zvine zvirevo zvekutenga zvine musoro, kushandiswa kwakakodzera kwezvigadzirwa kana kutenga zvigadzirwa zvinogoneka.
Iyi ndiyo tsika yekutanga yatinofanira kuisa mumba medu nekuti tinenge tave nekuchengetedza kukuru kwe "homwe" pamwe nenzvimbo nezvinhu zvekushandisa zvakare.
Kugadzirisa: Kune zvinhu zvisingaperi izvo zvinokanganisa iyi R. Yakarongwa kusakwana ndiyo chete inopesana uye ndizvo zvaunofanira kurwisa.
Zvese zvine mhinduro iri nyore uye chekutanga pane zvese isu tinofanirwa kuyedza kugadzirisa chero chigadzirwa, ingave fenicha, zvipfeko, zvigadzirwa zvemagetsi, nezvimwe.
Re-shandisa: izvi zviito zvinobvumidza kushandiswazve kwechimwe chigadzirwa kuchichipa chechipiri hupenyu, zvine zvakafanana kana zvakasiyana kushandiswa.
Ndokunge, matanho akanangana nekugadzirisa zvigadzirwa uye kuwedzera hupenyu hwavo hunobatsira.
Tora: Tinogona kudzoreredza zvimwe zvinhu kubva kuchinhu chemarara ndokuzvipatsanura kuti zvivashandise, mumwe muenzaniso wakajairika unowanzova wesimbi dzinogona kupatsanurwa kubva pamidziyo yakasiyana yatinorasa uye inogona kushandiswa zvekare.
Dzokororazve: Isu tatozviona, ndiwo maitiro neanoenderana ekuunganidzwa kwemarara uye mashandiro ekurapa anovabvumidza kudzoserwa muhupenyu hwekutenderera.
Kuparadzaniswa kwemarara panzvimbo kunoshandiswa kupa migero yakakodzera.
Zvatataura zvese izvi, tinoenda kumabhini ekuti zvishandiswezve, ayo sekuziva kwako, makuru acho matatu yero, bhuruu uye girini.
Kune vanhu vatsva mune izvi uye kune vakanyanya muhondo asi vachiri nekumwe kusahadzika, zvinowanzoitwa kashoma (pagore) macampaign edzidzo yezvakatipoteredza kana zvirongwa zvemarara uye zvekare, nechinangwa chekusimudzira kuziva nekuziva kwehunhu hwezvakatipoteredza mukugadzirwa kwemarara, pamwe nematanho epro- ezvemamiriro ekunze ekuderedza.
Iyi mishandirapamwe kana zvirongwa zvinowanzoitwa ne Junta de Andalucía, iyo Andalusian Federation yeMaguta neMatunhu (FAMP), Ecoembes neEcovidrio Uye zvakanaka kuti vanhu vadzidze kudzokorora, nekuti nhasi kune vanhu vazhinji vasingazive zvizere kuti vangashandise sei.
Saiti idzi dzinopa ruzivo uye kuraira kwemaitiro ekuti zvishandiswezve nenzira yakasarudzika uye ndiko kuti, kutanga kudzokorodza, tichafanirwa kuziva kuti ndeapi marara epamba: ndeaya anogadzirwa mudzimba semhedzisiro yemabasa epamba.
Anonyanya kugara ari masarasara ehupenyu zvinhu, mapurasitiki, simbi, bepa, makadhibhokisi kana magirazi midziyo uye makatoni. Uye, sezvauri kuona, chinenge chinhu chose chinogadziriswazve.
Nesumo iyi diki yandakapa, ndiri kuenda zvino kwazvinonyanya kukosha: nzira yekuparadzanisa nani marara atinogadzira, uye neizvi a kusarudza kuparadzana iyo inosanganisira kurongedza marara mumidziyo dzakasiyana zvinoenderana nehunhu hwavo uye zvivakwa.
Pazasi pane ese mabhini pamwe neyakanangana nemarara kubva kune rimwe bin:
Organic mudziyo uye unosara: organic chinhu uye chinoraswa kubva kune mamwe midziyo.
Yero mudziyo: yakajeka mapurasitiki midziyo, makatoni, magaba, maaerosols, nezvimwe
Mudziyo webhuruu: makadhibhokisi nemidziyo yemapepa, mapepanhau nemagazini.
Green mudziyo: girazi mabhodhoro, zvirongo, zvirongo uye zvirongo.
Mudziyo wemafuta: mafuta epamba mavambo.
Sigre Point: mishonga uye kurongedza kwavo. Ivo vanowanikwa muma pharmacies.
Battery mudziyo: bhatani uye alkaline mabhatiri. Ivo vanowanikwa muzvitoro zvakawanda uye zvivakwa zvemakanzuru.
Textile mudziyo: mbatya, mamvemve neshangu. Masangano mazhinji ane midziyo uye mabasa ekuunganidza.
Lamp mudziyo: fluorescent, magetsi ekuchengetedza mwenje mababu nema LED.
Imwe midziyo yemarara: bvunza kanzuru yeguta rako kuti varipi.
Nzvimbo yakachena: marara akakura akaita sematiresi, zvinhu zvemumba, nezvimwewo, zvisaririra zvependi, zvigadzirwa zvemagetsi uye marara ane ngozi mumba.
Ikozvino, inonyanya kushandiswa ndeye generic midziyo (organic chinhu), yero, girini uye bhuruu nekuti iwo marara atinogadzira zvakanyanya.
Isu tese tinoshandisa zvinopfuura Midziyo 2.500 pagore, vari vanopfuura hafu yavo epurasitiki.
Parizvino muAndalusia (uye ndiri kutaura nezveAndalusia sezvo ini ndichibva pano uye ndinoziva data zviri nani) zvinopfuura makumi mashanu muzana zvemidziyo yepurasitiki inodzokororwa, angangoita 50% esimbi uye 56% emakatoni. Hazvina kushata zvachose!
Iye zvino tarisa iko kutenderera kwepurasitiki uye girafu diki yekuenzanisira, kwaunogona kuona iko kwekutanga kushanda uye kushandisa mushure mekudzokorora.
Kupedzisa mudziyo uyu, tinofanirwa kutaura kuti marara ayo HERE kuenda kugaba iri ndeiyi: mapepa, makadhibhokisi kana magirazi emidziyo, mabhaketi epurasitiki, matoyi kana hanger, maCD nemidziyo yemumba.
Kurudziro: Chenesa midziyo uye woipeta kuti uderedze huwandu hwavo usati wakanda mumudziyo.
Pakutanga takaona zvinoiswa mumidziyo, asi kwete izvo HERE Inofanira kuiswa mavari uye mune ino kesi ndeye: yakasviba manapukeni, napkins kana matukisi, kadhibhodhi kana pepa rakashatiswa nemafuta kana mafuta, aruminiyamu firipi uye makatoni, uye mabhokisi emishonga.
Tarisa uone kutenderera kwepepa uye chokwadi chinonakidza.
Kurudziro: Peta makatoni acho usati waaisa mumudziyo. Usasiye mabhokisi kunze kwemudziyo.
Chii HERE inofanirwa kuiswa mumudziyo uyu ndeiyi: magirazi nemabhotoro akagadzirwa nekristaro, zvedongo, porcelain nemirazi, magirobhu ekuvhenekesa kana marambi emagetsi.
Kurudziro: Bvisa zvivharo kubva mumidziyo yegirazi usati waenda nazvo mumudziyo sezvo zvichikanganisa maitiro ekudzokesa
Kune ese 3000 mabhodhoro egirazi yetareti yakashandiswazve inogona kuchengetedza:
1000 kg yemarara isina kuenda kunorasirwa marara.
1240 kg yezvinhu zvakasvibirira izvo zvisingafanire kubviswa pane zvakasikwa.
Izvo zvakaenzana ne130 kg yemafuta.
Deredza kusvibiswa kwemweya kusvika pamakumi maviri muzana nekugadzira mapakeji matsva kubva kugirazi rakadzokororwa.
Kana tikabuda mumidziyo iyi toenda kune yakanyanya kushandiswa pane zvese, izvo zvezvinhu zvakasikwa, tinokwanisa zvakare kudzikisa nekushandisa zvirinani izvi nekuti kunyangwe chinhu chemanyowa chinogona kushandurwa kuita manyowa, anogona kushandiswa semupfudze.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve kompositi unogona kushanyira chinyorwa changu pablog rangu «Musangano wekushandisazve mishonga nekuisa manyowa uye Musangano wekugadzira manyowa senzira yekuongorora tsvina» kwaunozodzidza kukosha kwe compost uye kuti ungazviite sei pamba pamusoro pekuvaka compost bin.
Kudzokorora mabhini kumba
Dambudziko guru rinowanikwa nevanhu vazhinji hakusi kusaziva kwekudzokororazve kana kwakaipa kudzokorodza asi "husimbe" hunouya kubva pakuenda kumidziyo kana kuita kupatsanurwa kumba, kungave nekuda kwe nzvimbo kana kune imwewo mamiriro.
Kana iwe uri mumwe weavo vasina nzvimbo, iwe unogona kugara uchikwanisa kukwanisa kudzokorora zvakanaka, paInternet unogona kuwana akawanda mazano kana mazano ekuzvigadzirisa kuti zvive kumba kwako, vamwe, ichokwadi kuti vanogara zvakanyanya kana kudhura mari asi nguva dzose ndiwe unosarudza pakupedzisira.
Sezvo ini ndati, ivo vanoita mari senge aya mabhini ekudzokesa kumba. Ndiyo inonyanya kugadzikana kana zvasvika pakusvika pabasa, iwe unongotenga uye kurishandisa kumba.
Zvimwe zvakanyanyisa asi zvakachipa senge zvandiri kuzokuratidza pazasi.
Nemabhaketi ekare kana kadhibhodhi mabhokisi unogona kugadzira mabhini ako ekushandisa patsva sezvandakaita semuenzaniso zhizha rino muzvikoro zvezhizha kwandakashanda.
Mukupedzisira vana vanodzidza kukosha kwekuti zvishandiswezve uye zvakatonyanya mamwe maR sezvo isu tiri kushandisa zvekare zvinhu kuzvipa imwe shandiso uye isu tinodzikisa mashandisiro ayo.
Sezvauri kuona pane mhinduro zhinji, chete iwe unofanirwa kuwana chakanyanya kukodzera iwe.
Kana nemukana wakaita seni, pasina kushayikwa kwenzvimbo, zvinotevera zviri nyore sekuisa bhegi hombe pamusoro pemuchina wekuwachisa uye kukanda zvese zvichagadzirwazve uye kana zvazara enda kumidziyo uzvitsaure ipapo zvakafanana.
Ndinoziva kuti zvinokurumidza uye zviri nyore kuenda kunzvimbo yekudzokorodza mudziyo uye kurasa zvese kure sezvo uine izvo zvakatoparadzaniswa asi yega yega ine zvainazvo uye chakakosha chinhu pakupedzisira ndechekuti iwe udzore zvakare.
Ndinovimba yakushandira uye kuti iwe unoderedza, kuisazve uye kushandisa zvekare kuita hupenyu huri nani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kudzokorora » Kudzokorora mabhini, mavara uye zvinoreva
Iwo anogona kuitika avalanche mhedzisiro yezvichemo pamusoro pekucheka kune zvinowedzerwazve